Ukuphupha ngokugquma Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Igama elithi "umgqumo" lisetyenziselwa ukuchaza ingxolo enkulu kwaye ihlala ihlala ihlala ixesha elide. Lo mgqumo unokubangelwa ngumntu omnye okanye abaninzi okanye ngesilwanyana esinye okanye nangaphezulu.
Umzekelo ocacileyo wezilwanyana ezigqumayo ngokungathandabuzekiyo yingonyama. Kodwa iinkomo okanye enye imfuyo nayo inokubangela ukugquma okuninzi ngezandi zazo.
Kodwa nabantu bayagquma ngezihlandlo ezahlukeneyo. Khawucinge nje ngokuqhuma komsindo okukhala ngumsindo. Nokuba sele uphumelele, ungakhwaza uvuyo lwakho, ngakumbi ukuba belulangazelelwa.
1 Uphawu lwephupha «ukugquma» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukugquma» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukugquma» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukugquma» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kubona kwisimboli "ukugquma" isibhengezo Ukulwa Kunye nobunzima kwi el mundo vuka. Nabani na ova umgqumo ephupheni kungenzeka ukuba uqalise imeko eyingozi enokubenzakalisa kakhulu.
Ukuba umntu ophuphayo ngokwakhe uyagquma ephupheni lakhe, oku kunokwenzeka Ukuziva unomsindo yalatha imeko yangoku yobomi. Ukukhala kwabanye ephupheni kunokubonisa ukuba umhlobo okanye umntu omaziyo kusenokwenzeka ukuba ufuna uncedo kwakamsinya. Umntu okanye abantu ababangela i-hoot ephupheni banokubonelela ngolwazi oluthe kratya kwihlabathi elivukayo.
Ukugquma okanye ukubhomboloza kwezilwanyana ezinje ngephupha zihlala zibonisa ukuba umntu uyabonwa ngabantu abaneenjongo ezimbi ekuvukeni ubomi. Ukugquma kwezilwanyana zasendle ngelixa ulele, kufanelekile ukuba ube kunye nazo Shoot kunye nethuku lokujongana.
Ukuba umntu uva umgqumo wengonyama ephupheni lakhe, uya kuthi kungekudala akhawuleze acinge ngayo. ku khuthazwa ndijonge phambili. Abafazi baya kuye. Ukugquma kweenkomo kuhlala kubhekiswa kuko njengempumelelo kunye nophuhliso oluqinisekileyo kwilizwe lokwenyani njengomfanekiso wephupha.
Ingxolo yokuqhuba yemoto inokuchazwa okanye ibonwe njengokugquma. Ukuba imeko enjalo yephupha ibonakala xa ulele, kuya kufuneka ujonge ngononophelo ukuba yeyiphi na imoto. Umzekelo, ilori inokufikelela kwifayile ye- Zakhono kwaye utsalele ingqalelo kwiitalente zomphuphi ekufuneka ajongane nazo.
Uphawu lwephupha «ukugquma» - ukutolikwa kwengqondo
Kubonwa ngokwembono yengqondo, ukugquma kujongeka njengomfanekiso wephupha njenge isilumkiso yaqondwa ephupheni. Kuya kufuneka ujonge ingqalelo yakho kwizinto ezibalulekileyo kwihlabathi eliphaphamayo kwaye ungangxoli kwizinto ezingenamsebenzi.
Ngaphakathi ekutolikeni kwengqondo ngokwasemaphupheni, iimvakalelo ekugxilwe kuzo ngamaphupha zikwadlala indima ebalulekileyo kutoliko. Ukugquma koloyiko okanye ukukhala ngokuzikhusela ephupheni kuhlala kulumkisa umntu ukuba ajongane noloyiko lwabo ebomini bokuvuka.
Nabani na ogqumayo kwaye akhwaze ngovuyo emaphupheni uhlala efumaneka kwilizwe lokwenyani. Ukudakumba. Apha, nangona kunjalo, inkathalo kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba ingagqithisi ekuhambeni kwexesha, kodwa ukuzama ukulungelelanisa ukungqinelana. Ukugquma komsindo ephupheni kunokubonisa ukungabikho kokusesikweni okufunyanwa ngumphuphi kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «ukugquma» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha "ukugquma" inokuqondwa ngaphakathi kohlalutyo olungaphaya kwephupha ngengqondo yokuba umphuphi ufumana isoyikiso Ingozi ukuze wazi isiqu sakho sokomoya.